Hargeysa-(Puntland Mirror) Maamulka Somaliland ayaa maanta oo Arbaco ah toogasho ku fuliyay lix qof oo loo haysto dambiyo kala duwan, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka katirsan. Labo kamid ah lixda nin ayaa lagu eedeeyay […]
July 27, 2019 Puntland Mirror 0
Ceerigaabo-(Puntland Mirror) Dagaal ayaa maanta oo Sabti ah gobolka Sanaag ku dhexmaray ciidamada maamulka Somaliland iyo jabhada uu hoggaamiyo Kornayl Caare. Dagaalka maanta ayaa ka dhacay buurta Tabca taasoo u dhow magaalada Ceerigaabo, sida ay […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland iyo Somaliland ayaa isku afgartay in is-dhaafsadaan maxaabiistii dagaalkii Tukaraq, sida ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo ay sheegeen. Maxaabiis is-dhaafsiga oo ay fududeynayso haayada ICRC ayaa la filayaa in uu dhaco bisha soo […]
March 14, 2019 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Xiisad colaadeed ayaa lagu soo waramayaa in ay ka jirto gobolka Sanaag. Sida ilo-wareedyo dhanka ammaanka katirsan ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror xiisada ayaa korodhay kadib markii ciidamo ka kala socda […]
March 5, 2019 Puntland Mirror 0
Laascaanood-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex askari oo katirsan ciidamada maamulka Somaliland ayaa dhintay kadib markii maleeshiyo deegaanka ah ay weerar ku qaadeen, sida ay sheegeen dadka deegaanka. Weerarka ayaa subaxnimadii hore ee Isniinta ka dhacay […]
January 11, 2019 Puntland Mirror 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Maamulka Somaliland ayaa doonaya in uu martigeliyo saldhigyo ciidan badeed oo ay leeyihiin UK iyo Russia. Asbuucaan, xoghayaha difaaca Britain Gavin Williamson ayaa safar aan horey loo sii sheegin ku tagay Somaliland isaga […]
November 10, 2018 Puntland Mirror 0
Dubai-(Puntland Mirror) Saldhiga milatariga Imaaraatka Carabta ee Somaliland ayaa shaqada bilaabi doona bisha June ee sanadka soo socda, sida uu sheegay diblomaasi katirsan Somaliland. Habka kaamaradaha dabagalka ayaa loo adeegsan doonaa si loo ilaaliyo saldhiga […]